I-La casina di Pia - I-Airbnb
I-La casina di Pia
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Maria Pia
U-Maria Pia uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
I-La Casina di Pia itholakala enkabeni ye-Montieri (Grosseto). Ibheke isikwele esincane nesidala futhi izungezwe izindlu zamatshe. Ifulethi, elingamamitha-skwele angu-60, lalungiswa ngo-2016 futhi linikeza indawo enkulu yokudlela/indawo yokuhlala enosofa nomabonakude, ikamelo lokulala elilala abantu ababili negumbi lokulala elinemibhede emibili elala umuntu oyedwa negumbi lokugezela. I-Casina di Pia ihlotshiswe ngesitayela esithandekayo esinama-tones okukhanya.
Ikhishi linemishini egcwele futhi linomshini wokugeza izitsha. Amashidi namathawula ayatholakala ezivakashini. Kukhona idivayisi ye-TV futhi ukushisa kungumandla we-geothermal ngakho ingasetshenziswa futhi ekwindla nasebusika.
I-Montieri ingamamitha angu-700 ngaphezu kolwandle futhi inemvelaphi ye-Etruscan exhunywe nemiphakathi kanye nesiliva le ndawo eyayicebile ngayo. I-Montieri cishe ivela emhlabeni osuka emoyeni, intaba yase-Greece.
Ukusuka edolobhaneni ungaqala ohambweni lwemvelo noma ukuya edolobheni lobuciko. Idolobhana liseduze ne-Cornate Nature Reserve futhi ngaphakathi kwendawo ebizwa ngokuthi amagquma ensimbi anezindlela eziya ezimayini ezindala. Kungamakhilomitha angu-40 ukusuka e-Follonica, 25 ukusuka e-Masa Marittima. Futhi ogwini ungakwazi ukufinyelela kalula i-Populonia ne-Gulf of Baratti. Esikhundleni salokho, kunezindawo ongazivakashela: i-San Galgano Abbey (inkemba edwaleni ), i-Radicondoli, i-Volterra ne-Siena.
Ekwindla, le ndawo igcwele amakhowe namabhokisi.
Ibungazwe ngu-Maria Pia